ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ သိမ်းဆည်းမြေယာများကို ရောင်းချပြီး အသိမ်းခံထားရသည့် လယ်သမားများ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၇ – သိမ်းဆည်းထားသော မြေယာများကိုရောင်းချ၍ အသိမ်းခံရသောလယ်သမားများကို မြေလျော် ကြေးပြန်လည်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဧပြီ ၂၇ ရက်က ပြောသည်။
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှုကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သိမ်းဆည်းထားသော မြေယာများကို လုပ်ငန်းရှင်များအား ရောင်းချကာ အသိမ်းခံရသော လယ်သမားများကို ယင်းကာလ ပေါက်ဈေးအတိုင်း လျော်ကြေးပြန်လည်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧပြီ ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် မြန်မာ့စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ (၂၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက”လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံရမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြေလျော် ကြေးပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လယ်သမားတွေကို လျော်ရမယ့် ၄ဝ ဘီလီယံနီးနီးလောက်ရှိတဲ့ လျော်ကြေးအတွက် မြေကိုထုတ်ရောင်းပါမယ်။ အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေကို အဲဒီအချိန်ကာလကပေါက်ဈေးကို လျော်ကြေးပေးပါ့မယ်။ ကျွန် တော်တို့ ရောင်းပါမယ်။ မြေတွေကို မကြာခင် ထုတ်ရောင်းဖို့ အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းထား ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ စာရင်းကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်”ဟု ပြော သည်။
ယင်းသို့ သိမ်းဆည်းထားသောမြေယာများအား ထုတ်ရောင်း ရာတွင် ယင်းမြေအပေါ် အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ၊ တန်ဖိုးသင့်၊ တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမြေကိုဝယ်ယူ၍ မြေကစားမှုများကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ”မြေကို ထုတ်ရောင်းတဲ့နေရာမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ရောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဒီမြေကိုယူပြီး မြေကစားမှုကိုတော့ ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ တကယ် စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံတွေလာတည်ဆောက်မယ်။ ဒီနေရာမှာ အများပြည်သူ နေ ရေး၊ ထိုင်ရေးကိစ္စအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးသင့်၊ တန်ဖိုး မျှတတဲ့အိမ်ရာတွေ ပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တေ်ာတို့ဘက်က ကြိုဆိုပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းရောင်းချပြီး မြေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးတွေမြင့် ကစားဖို့ဆိုရင် ဒါက တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်နိုင်တဲ့အပြင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ စီးပွားရေးအကျပ် အတည်းအခက်အခဲရောက်သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် သိမ်းဆည်းခံ မြေယာများ ရောင်းချရာတွင် ဈေးကစားခြင်းမပြုနိုင်ရန်အတွက် ထိန်းညှိဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် မီးဖိုချောင်၌ တပ်ဆင်ထားသော ပလပ်ခုံအပူလွန်ကဲရာမှ နေအိမ် ၃၂ လုံး မီးလောင်ကွ??
ချန်ပီယံလိဂ်တွင် အောင်မြင်မှုရသင့်ပြီဟု အမ်ဘာပီတိုက်တွန်း
အိမ်အကူဒေါ်ကရင်မ သေဆုံးခဲ့သည့်အမှုကို မြန်မြန်စစ်ပေးရန် စွပ်စွဲခံဥပဒေအရာရှိ တောင်းဆို